सांसदको प्रश्न-सभामुख महोदय ! केही सांसदको मात्र अनुहार टिभीमा देखाउनु विभेद होइन ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार सांसदको प्रश्न-सभामुख महोदय ! केही सांसदको मात्र अनुहार टिभीमा देखाउनु विभेद होइन...
सांसदको प्रश्न-सभामुख महोदय ! केही सांसदको मात्र अनुहार टिभीमा देखाउनु विभेद होइन ?
काठमाडौं । सभामुख ज्यू, यहाँ (संसदमा) क्यामेरा घुमाउने र सांसदको अनुहार देखाउने कुरामा समेत विभेद छ ! सांसद हेरेर टीभीमा अनुहार देखाइन्छ । खास खास माननीयको मात्र अनुहार देखाउनु सांसदमाथिको विभेद होइन ?
एमाले सांसद नरदेवी पुनले संसद भवनको ल्होत्से हलमा उभिएर यसो भनिरहँदा सभामुख ओनसरी घर्ती मञ्चमा बसेर सुनिरहेकी थिइन् । यद्यपि यो संसद बैठक भने थिएन । ड्यासमा प्रमुख दलका सचेतक र संसदका महासचिव पनि थिए ।
बिहीबार संसद सचिवालयले मोबाइल एप्स र नयाँ वेबसाइट उद्घाटनपछि सांसदहरुलाई यो प्रविधिबिारे आफ्ना जिज्ञासा राख्न समय दिएको थियो । यहि समयको उपयोग गर्दै सांसद पुनले सचिवालयको श्रव्यदृष्य युनिटबाट भएको विभेदको पोल खोलिन् ।
सांसद पुनले आफू गाउँ जाँदाको दुःख पनि सुनाइन् । टीभीमा खासखास सांसदलाई मात्र अनुहार देखाउने र अरुले बोलेको कुरा नदेखाउने गर्दा आफूहरु जनताको नजरमा नालायक हुनुपरेको उनको दुःखेसो रहेछ ।
पुनले भनिन्-खासखास सांसदलाई मात्र टीभीमा देखाइने गरेको छ । हामी जाँदा जनताले तपाईलाई त टिभीमा पनि देखिएन, केही बोल्नु भएन भनेर गुनासो गरे । सबैलाई व्यवहार समान होस् ।’
हुन त यो गुनासो नरदेवी पुनको मात्र होइन । केही सांसदले यसअघि संसदको बैठकमै पनि टीभीमा देखाउने सन्दर्भमा बिभेद भएको गुनासो गरेका थिए । नेता हेेरेर, नजिकका व्यक्ति हेरेर अनुहार देखाउने र संसदमा बोलेका कुरा देखाउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
आफ्नो सुझाव राख्ने क्रममा नेकपा मालेका सांसद अइन्द्रविक्रम नेम्वाङले नरदेवी पुनको गुनासोको समाधान सुनाए । उनले भने, ‘संसदको एप्स र वेबसाइटमा व्यक्तिगत रुपमा कुन सांसदले के बोले भनेर भिडियो सहित प्रोफाइल राखिदेओस् ।’
संसद सचिवालयको श्रब्य दृष्य जिम्मा लिएको एजेन्सीले संसदभित्रका गतिबिधिहरुको भिडियो खिच्ने गरेको छ ।सोही भिडियो टेलिभिजनहरुले लिएर प्रसारण गर्छन् । अब संसदको सबै गतिविधिको भिडियो पनि वेभसाइटमा राखिने भएको छ
Previous articleजनैपूर्णिमामा पुजा गर्न भक्तजनहरू रिखार मन्दिरमा
Next articleदुईरोपनी खेतबारीमा फैलिएको गाँजा नष्ट